लेगो बूस्ट मूभ हब: एलईडी कलर कोडिंग, रिसेटिंग र अधिक - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> खिलौने >> लेगो बूस्ट मूभ हब
मैले यी ईंटहरूको बारेमा थोरै जानकारी फेला पारेको छु, त्यसैले मैले यहाँ पाएको सबै कुरा छोडें र मलाई लाग्छ कि यो राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनु रोचक छ।
यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ किट थाहा पाउनु हो र मलाई के रोकिन्छ भनेर हेर्नुहोस्, ममा नक्काल गर्नुहोस् LEGO बूस्ट गाइड
हब एलईडी रंग कोड सार्नुहोस्
यो मूभ हबमा हरियो बटन र एलईडी छ जसले बिभिन्न राज्यहरूलाई संकेत गर्दछ, तर मैले यो जानकारी अनुप्रयोगमा पहुँचयोग्य फेला पारेको छैन। त्यसो भए, खोजी पछि आधिकारिक वेबसाइट र बीचमा GitHub, म तपाईलाई प्रत्येक र means कोडको अर्थको एक संकलन छोड्दछु
छोटो चमकको साथ सेता प्रकाश फ्ल्याश गर्दै। यो प्यारो मोड हो। हरियो बटन थिच्नाले २० सेकेन्डको लागि ब्लुटुथ मार्फत जडान हुन प्रयास गर्दछ
फ्ल्याशिंग सेतो बत्ती लामा झिम्का साथ। उपकरण रिसेट हुँदैछ
स्थायी निलो बत्ती। ब्लुटुथ जडान गरिएको छ र सबै ठीक काम गर्दछ
सुन्तला प्रकाश फ्ल्याशिंग। कम ब्याट्री। यस अवस्थामा त्यहाँ A एएए ब्याट्रीहरू छन् (१. 6.V मा LR03)
रातो, हरियो, निलो चमकता प्रकाश। ट्याब्लेट वा मोबाइलको अनुप्रयोगले सार्स हबको फर्मवेयर अद्यावधिक गर्न बाध्य पार्यो। पलकको रंग वैकल्पिक हुनेछ। अनुसार आधिकारिक पृष्ठ फर्मवेयर अपडेट १ 15 मिनेट भन्दा बढि लिनुहुन्न।
Sabemos que यस LEGO किटको कमजोर बिन्दु मध्ये एक यसको दस्तावेज हो। मलाई आशा छ कि चाँडै ब्याट्रीहरू ठाउँमा राखिन्छ र यसलाई उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
कसरी सार्ने हब रिसेट गर्ने
बक्समा आउने पोष्टरको पछाडि छलफल गरिएको रूपमा, कडा विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेपले उत्पादको सामान्य संचालनमा बाधा पुर्‍याउँछ। यदि त्यसो हो भने, उत्पाद रिसेट गर्नुहोस् र यसलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न जारी राख्नुहोस्।
यसलाई रिसेट गर्नुहोस्। र इमेजमा यसको लागि हामीलाई आग्रह गरिएको छ १० सेकेन्डको लागि हरियो हब बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्.
कसरी थाहा पाउने यदि मेरो उपकरण LEGO Boost को साथ उपयुक्त छ
ब्याट्री कसरी बदल्ने
तल एक स्क्रूको साथ कभर छ। तपाईंले भर्खरै हटाउनुपर्नेछ र आउन लागेको ब्लक हटाउनुहोस् AAA ब्याट्री को तीन जोडी, त्यो हो, bat ब्याट्री।
चित्रमा राम्रो देखिन्छ
याद गर्नुहोस् कि हामीले एउटा ट्रिक प्रकाशित गरेका छौं ब्लुटुथ जडानलाई जोड दिनुहोस्, जब तपाईं जोड्न चाहनुहुन्न.
1 हब एलईडी रंग कोड सार्नुहोस्
2 कसरी सार्ने हब रिसेट गर्ने
3 ब्याट्री कसरी बदल्ने
4 अन्य विषयहरू